Chelsea oo Badisay iyo Manchester City oo Bareejo Lagu Celiyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Chelsea oo Badisay iyo Manchester City oo Bareejo Lagu Celiyay “SAWIRRO”
Kooxda Aston Villa ayaa waxaa garoonkeeda Villa Park 1-2 uga badiyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii sideedaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jores Okore aya bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool bareejo ah u dhaliyay kooxda Aston Villa.
Kooxda Aston Villa ayaa dhalisay goolkeedii ugu horeeyay ee Premier League-ga,ka dib 11-saacadood oo aysan wax gool ah dhalin.
Ciyaaryahan Branislav Ivanovic ayaa daqiiqadii 66-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Ciyaaryahan Juan Cuadrado oo ay kooxda Chelsea kala soo wareegtay kooxda Fiorentina ayaa dhamaadkii ciyaarta bedel ku soo galay,iyadoo lagu bedelay ciyaaryahan Willian.
Kooxda Chelsea ayaa sii kordhisay dhibcaha ay ku hogaamineyso horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga,waxana ay leedahay 56-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 22-dhibcood.
Kooxda Machester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Hull Ciy.
Kooxda Hull City ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 35-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan David Meyler,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan James Milner ayaa dhamaadkii ciyaarta kubad laad xur ah aheyd ku bareejeeyay kooxda Hull City,waxana ay ciyaarta ku dhamaatay barbardhac 1-1 ah.
Kooxda Manchester City ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka ingiriiska,waxana ay leedahay 49-dhibcood,halka kooxda Hull City ay horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.
Kooxda Queens Park Rangers ayaa garoonkeeda Loftus Road 0-1 uga badiyay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Sadio Mane ayaa waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Southampton.
Kooxda Southampton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 45-dhibcood,halka kooxda QPR ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu Hooseya.
Kooxda Swansea City ayaa garoonkeeda Liberty Satdium barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Sunderland.
Kooxda Sunderland ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Jermain Defoe,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Sung-Yueng Ki ayaa daqiiqadii 66-aad ee ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda Swansea City.
Kooxda Swansea City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiskauga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 34-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jiro kaalinta 14-aad,iyadoo leh 24-dhibcood.
Kooxda Leicester City ayaa waxaa garoonkeeda King Power Stadium 0-1 uga badiyay kooxda Crystal Palace.
Ciyaaryahan Joseph Ledley ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Crysal Palace.
Kooxda Crystal Palace ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 13-aad,waxana ay leedahay 26-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Madaxweynaha Jabuuti Iyo Ra’isul Wasaaraha Ethiopia Oo Kulan Kuwada Qaatay Jabuuti Kana Hadlay Arrimo Kale Duwan